दलान नेपाल : काहा-काहा छन मधेश विद्रोह गर्ने नेताहरु ?
काहा-काहा छन मधेश विद्रोह गर्ने नेताहरु ?
देश विदेशको हरेक निकायलाई चकित पार्ने गरी भएको पहिलो मधेश विद्रोह तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको ब्यानरमा शुरुवात भएको थियो । तत्कालिन अन्तरिम संविधानमा संघीय व्यवस्थाको वारेमा केही उल्लेख नगरिएपछि काठमाडौमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा उक्त संविधान जलाए पछि मधेशभरीको आन्द्योलनले विद्रोहको स्वरुप ग्रहण गरेको थियो । उक्त विद्रोहको वेला यादवको अध्यक्षतामा फोरम २१ सदस्यीय थियो । यादव संगै नेताहरु जेपी गुप्ता, भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विश्वास, रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनल, उपेन्द्र झा, विपी यादव, अमर यादव, रवीन्द्र ठाकुर, कैलास महतो, आरसी यादव, रामसहाय यादव, रामबाबु यादव, रवीन्द्र यादव,कृष्ण बहादुर यादव, चन्देश्वर यादव, परमानन्द मेहता, भुपेन्द्र चौधरी, भीम राजवंशी र रामप्रवेश साह फोरमका केन्द्रिय नेताहरु थिए । तर आज उपेन्द्र यादवसंग यी मध्ये तीन जना बाहेक अरु कोई पनि छैन । यादवसंग हाल रामसहाय यादव, रामबाबु यादव र चन्देश्वर यादव मात्रै छन भने बाकी १७ जना यादवलाई छाडीसकेका छन ।
उपेन्द्र यादवले सबै भन्दा पहिलो फुटको धक्का २२ बुदे सम्झौता गदौ खाएका थिए र त्यसपछि विस्तारै फुटदै गएको फोरमले मधेश विद्रोहवाट शक्तिशाली बनेका यादवलाइ फोरम विघटन गराउने अवस्थामा पुर्यादिएको छ ।
१३ भदौ २०६४ मा उपेन्द्र यादवले सरकारसंग २२ बुदे सम्झौता गर्दा फोरमका तत्कालिन उपाध्यक्षहरु किशोर विश्वास, भाग्यनाथ गुप्ता, महासचिव रामकुमार शर्मा र जितेन्द्र सोनलले १५ भदौमा फोरम परित्याग गरेका थिए । २२ बुदे सम्झौता प्रती असहमती जनाउदै ती नेताहरुले पार्टी पत्यिाग गरेको घोषणा गरेका थिए । फोरम भित्रियाहरुका अनुसार तत्कालिन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसंग यादवले रु ५० लाख लिएर २२ बुदें सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । मुख्यगरी पैसा लिएर सहमतीमा हस्ताक्षर गरेकै कारण यी नेताहरुले पार्टी परित्याग गरेका थिए । जुन कुरा वाहिर सार्वजनिक चाही भएन । त्यसपछि यादवले अमर यादव, विजय गच्छदार, जेपी गुप्ता लगायतका नेताहरुवाट पटक पटक गरी फुटको मार खेपीरहे ।
मधेश विद्रोहताका फोरमका उपाध्यक्षहरु रहेका भाग्यनाथ गुप्ता र किशोर विश्वास मात्रै होई अन्य कयौन नामहरु राजनितीको मुलधारमा आज भोली देखिदैन्न । भाग्यनाथ गुप्ताले आफनै नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश नामक पार्टी खोलेका छन भने किशोर विश्वासले थारु जनजाती सम्बन्धी छुटै पार्टी खोलेका छन, जुन दुवै खासै अस्तीत्वमा देखिएका छैन । रामकुमार शर्मा तमलोपा हुदै माओवादीमा अहिले सक्रिय छन भने जितेन्द्र सोनल तमलोपामा सहमहामन्त्रीको रुपमा सक्रिय छन । यसैगरी अमर यादव पनि आफनै नेतृत्वमा मधेश तराइ फोरम नामक छुटै पार्टी दर्ता गराएका छन । उता उपेन्द्र यादवलाई आन्दोलनको जग बनाउनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका जेपी गुप्ता अहिले मधेशमा तराई मधेश राष्टिय अभियानको ब्यानरमा छुटै पार्टी बनाउन हिडिसकेका छन । बिपी यादव, कृष्ण बहादुर यादव तमलोपामा छन भने् रवीन्द्र ठाकुर, आरसी यादव,परमानन्द मेहता, भुपेन्द्र चौधरी विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकमा सक्रिय छन । उपेन्द्र झा, रामप्रवेश साह लगायतका केही नेताहरु स्वतन्त्र रुपमा मधेशका विभिन्न गतिविधीहरुमा सक्रिय देखिन्छन ।
यसरी जुन आन्दोलनको भरमा उपेन्द्र यादव शक्तिशाली भएका थिए । आज त्यही आन्दोलन गर्ने नेताहरुको जमात उनीसंग नहुदा त्यसले के को संकेत गर्छन । त्यसैले, जानकारहरु भन्छन, यादव त्यतीकै यो अवस्थामा आएको काहा हो र ?
Unknown November 28, 2014 at 3:22 PM